Voasazy higadra roa taona an-tranomaizina, sazy mihatra i Zafintsoavina Séverine, Ben’ny tanàna tao Angoaka Sud. Nivoaka ny zoma 2 aogositra 2019 ny didim-pitsarana tamin’ny raharaha nahavoarohirohy azy.
Telo ny vesatra niampangana azy dia fampijaliana, fanerena olona hanome vola ary fikambanan-jiolahy. Efa notazomina am-ponja vonjimaika nanomboka ny sabotsy 6 jolay 2019 izy noho ireo raharaha ireo. Mbola voarohirohy tamina raharaha vono olona niniana natao ihany koa izy.
Kandida mpisolotoerana tamin’ny lisitra IRD tamin’ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin’ny Distrikan’Analalava, tamin’ny fifidianana notontosaina ny 27 mey 2019 ity Ben’ny tanàna nomelohon’ny Fitsarana ity.